Kunconywe umsebenzi we-Dambuza Youth Centre | Eyethu News
Kunconywe umsebenzi we-Dambuza Youth Centre
“Bathi izimpilo zabo zishintshe kakhulu selokhu bafika lapha “
Kwesobunxele nguNksz Sphumelele Dlamini, uMnu Mxolisi Duma kanye noNksz Thuli Dlamini abangamanye amalunga eqembu iThe Stars. Isithombe uNtombizethu Ngcobo
KUNCONYWE umsebenzi omuhle owenziwa yiDambuza Youth Centre njengoba seyishintshe izimpilo zabantu abasha abaningi baseMgungundlovu. Lezincomo zidluliswe ngamalunga eqembu labantu abasha elibizwa nge- The Stars nalo ezimpilo zalo ezishintshwe ukufika kulendawo njengamanje sebenebhizinisi elibhalisiwe lokupheka.
Omunye wamalunga aleliqembu uNksz Thuli Dlamini owenza i- Intenship kulendawo uthe ngesikhathi befika lapha batshelwa ukuthi kufanele baye ekhempini . “Safundiswa ngokubaluleka kokonga imali kanye nangezindlela abantu abasha abangazisebenzisa ukuze benze imali ngoba kunenkinga enkulu yokungabi khona kwemisebenzi kanti futhi ziningi izinto thina bantu abasha esizibandakanya nazo ezingekho zinhle. Ngesikhathi sesibuya ekhempini sacela umphathi wakulendawo ukuthi asinike ithuba lokutshala izimbali yena mase esipha imadlana esizokwazi ukuyifaka kwi- akhawunti yethu, “ kuchaza yena.
Funda olunye udaba : Uhlonishwe ngeziqu zobudokotela usomabhizini waseMgungundlovu
Uqhube wathi baphinde baqeqeshwa kwezokuqalwa kwamabhizinisi bafundiswa ngokubaluleka kokwenza ucwaningo ubheke ukuthi yini ongayidayisa abantu abayidingayo. “Sabona kufanele sivule ibhizinisi lokupheka saqala ngokuphekela amaqembu amancane, izinhlangano kanye noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kusukela lapho saqashwa kakhulu. Kusukela lapho sikhule kakhulu sacela kumphathi ukuba asinike imvume yokusebenzisa ikhishi lakhe wavuma,” kubeka yena. Amalunga aleliqembu aphethe ngokuthi selokhu bafika lapha ngonyaka ka- 2015 izimpilo zabo zishintshe kakhulu ngoba okokuqala bayasebenza futhi bayahola.
Kume ukufunda bekhala ngothisha “othuka” abafundi eMbanjwa Primary